CityMaps2Go Pro, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
CityMaps2Go Pro, yemahara kwenguva shoma
Mumazuva mashoma mazororo eKisimusi achatanga uye vazhinji vachatora mukana wekuenda kune imwe nyika. Pakufamba kuenda kunyika yatisingazive, chakanakira kuve nechikumbiro chakaiswa pane yedu iPhone inotibvumidza kuziva nguva dzose kwatinenge tiri uye mumiriri weguta ratiri kushanyira. MuApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti tiite basa iri, asi pakati pazvo zvese, CityMaps2Go Pro yakamira, application inotibvumidza kurodha mepu uye magwara ekufambisa ekushandisa pasina internet kubatana. CityMaps2Go Pro ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye9,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuikanda zvachose mahara kuburikidza nekubatanidza kwandinosiya panopera chinyorwa.
CityMaps2Go Pro ine avhareji chiyero che4,5 nyeredzi kubva pa5 inogoneka, ine inopfuura mazana mana emakiromita. Icho chiri muchiSpanish, iwe unoda angangoita iOS 4000 uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Main maficha eCityMaps2Go Pro
RONGA ZVITSVA ZVEMAZUVA - Chengetedza nzvimbo dzese dzaungade kushanyira. Gadzira rondedzero uye gara uine ako ekufambisa mazano padyo paunenge uchizvida.
GADZANA ZVIRI MUKATI NESHAMWARI - Iye zvino unogona kugovana zvirongwa zvako zvekufamba neshamwari. NeCityMaps2Go, hazvina kumbove zviri nyore kuronga nzendo dzeboka.
KUSANGANISWA KANA KUTI KUSANGANIKWA: CityMaps2Go inoshanda kunyangwe iwe usina internet yekuwana, saka haufanire kunetseka nezvekufamba-famba kwemadhorobha ekunze kana kushaya kufukidzwa kana uri musango.
DETAILED TOURIST ZVIRI MUKATI: CityMaps2Go inosanganisira mapikicha pamwe nerakazara uye ruzivo rwakagadziridzwa.
MAPA ANODZIDZISWA: migwagwa, gastronomic migwagwa, nzira dzekutenderera ... Tsvaga zvirimo pamepu yepasirese yenyika chero kwauri.
TSVAGA UYE KUTAURA: Tsvaga iyo saiti saiti nemazita kana kutarisa zvikamu senge maresitorendi, zvivakwa, mahotera, zvitoro, mabhawa, nezvimwe.
BACKUP UYE SYNCHRONIZATION: Gadzira account yemushandisi uye uwane iyo kubva kune chero ako eIOS zvishandiso.
Iko kunyorera, pamusoro pekutipa isu ese ePRO mashandiro, inosanganisira ye-mu-kutenga kutenga kuti ugone kunakidzwa nemabasa ekutanga, zvisina kukosha Kunze kwekunge isu tichida rubatsiro rwekuvandudza rwekukurumidza uye tichigona kugadzirisa mepu uye zvinyorwa zvine mavara akasiyana uye maumbirwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » CityMaps2Go Pro, yemahara kwenguva shoma
Ichi chishandiso hachi sanganisira iyo browser basa, handiti?
Runyerekupe rweOLED uye yakakomberedzwa skrini mune iyo iPhone 8 inowana simba
Tambo dzakanakisa dzekupa maitiro matsva kuApple Watch yako